နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက် / ICC ကအနုညာတစီရင်အပိုဒ်
စာချုပ်တစ်ခု ICC ကအနုညာတစီရင်အပိုဒ်အပါအဝင် by, အဆိုပါပါတီများကိုသူတို့အငြင်းပွားမှုခုံသမာဓိများကဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုဟာအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအားဖြင့်အုပ်ချုပ်မည်ပါလိမ့်မည်သဘောတူ အနုညာတစီရင်၏ ICC ကစည်းကမ်းများ, ခုံသမာဓိ၏ထိုင်ခုံမှာမဆိုမဖြစ်မနေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပြင်.
ဤသည်ကိုလည်းဆိုလို အနုညာတစီရင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပါတီများနှင့်ခုံသမာဓိခုံရုံးအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်, ဥပမာ,, အတည်ပြု, ခုံသမာဓိလူကြီးခန့်အပ်ခြင်းနှင့်အစားထိုး, အဆိုပါခုံသမာဓိလူကြီးဆန့်ကျင်လုပ်ကိုမဆိုစိန်ခေါ်မှုများအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း, အဆိုပါခုံသမာဓိရဲ့ start မတိုင်မီအရေးပေါ်တရားစွဲဆိုမှုကြီးကြပ်, နှင့်ခုံသမာဓိဆုစိစစ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြု.
အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းဝါကျပါတီများစာချုပ်များ၏ညှိနှိုင်းမှုစဉ်အတွင်းသဘောတူလေ့အရာပေါ်တွင်နောက်ဆုံးကိစ္စများ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏နေစဉ်, အငြင်းပွားမှုပေါ်ထွန်းသင့်ပါတယ်ရေတွင်းတစ်တွင်း-ရေးဆွဲခုံသမာဓိအပိုဒ်ပါတီများလျော့နည်းအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များသုံးစွဲကြောင်းသေချာစေရန်နိုင်ပါတယ်. အမှုအတွက်ပါတီများ၎င်းတို့၏အငြင်းပွားမှုအတွက်နှင့်အညီဖြေရှင်းခံရဖို့ချင်ပါတယ် ICC ကအနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အဆိုပါ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်းအကြံပေး အဆိုပါပါတီများကိုသူတို့စာချုပ်ထဲမှာအောက်ပါစံ ICC ကခုံသမာဓိဝါကျနှင့် ICC ကကြားဝင်ဖြန်ဖြေဝါကျထည့်သွင်းရန်.
စံ ICC ကအနုညာတစီရင်အပိုဒ်
"ထဲကဒါမှမဟုတ်လက်ရှိစာချုပ်နှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ထွက်လာသောအားလုံးအငြင်းပွားမှုများနောက်ဆုံးတွင်ဆိုပါတယ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီခန့်အပ်ထားသောတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောခုံသမာဓိလူကြီးများကစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနိုင်ငံတကာကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင်၏စည်းကမ်းများအောက်တွင်အခြေချခံရကြလိမ့်မည်."
ငါတို့သည်လည်းခုံသမာဓိ၏ထိုင်ခုံစပ်လျဉ်းစီးဆင်းနေသောသတ်မှတ်ချက်များထည့်သွင်းရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များပုံမှန်အားအကြံပေး, အဆိုပါခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုအဖြစ်စာချုပ်အုပ်ချုပ်ဖြင့်ထိရောက်သောဥပဒေများတွင်အသုံးပြုရမည့်ဘာသာစကား, အငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်မကြာခဏအငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စများဖြစ်သော.
"ခုံသမာဓိ၏ထိုင်ခုံရကြလိမ့်မည် [... ဥပမာ,, စင်္ကာပူ].
အဆိုပါခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ဘာသာစကားကိုရကြလိမ့်မည် [... ဥပမာ,, အင်္ဂလိပ်].
ဤသည်စာချုပ်များ၏ထိရောက်သောဥပဒေဖြင့်အုပ်ချုပ်ခံရကြလိမ့်မည် [... ဥပမာ,, ဆွစ်ဇာလန်]."
တစ်ဦး၏ဖြစ်နိုင်ခြေမပါဘဲ ICC ကအနုညာတစီရင် အရေးပေါ်ခုံသမာဓိ
အမှုအတွက်ပါတီများအနေနဲ့အရေးပေါ်ခုံသမာဓိများက conservatory အစီအမံများအတွက်အာဏာရတောင်းခံများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ထုတ်ချင်ပါတယ်, အောက်ပါကြေညာချက် ICC ကခုံသမာဓိ၏ဤအင်္ဂါရပ်များထွက်ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက်စံအပိုဒ်ပြီးနောက်ဆက်ပြောသည်ရပါမည်.
ICC ကိုမပါဘဲ ICC ကအနုညာတစီရင်''s ကို အမြန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အဆိုပါပါတီများမှာလည်းအလုပ်တွင်စေသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအငြင်းပွားမှုအတွက်ပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာထက်ကျော်လွန်ဘယ်မှာအငြင်းပွားမှုများလျှောက်ထားလိမ့်မည်ဟု-in ကိုရွေးချယ်နှင့်သူတို့၏စာချုပ်ထဲမှာပေးစေခြင်းငှါ2သန်း, ICC ကခုံသမာဓိမှတဆင့်ဖြေရှင်းအငြင်းပွားမှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ.
"ဒီပါတီများသဘောတူ, အပိုဒ်အညီ 30(2)(ခ) စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနိုင်ငံတကာကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင်၏စည်းကမ်းများ၏, အဆိုပါအလုပ်တွင်စေသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနည်းဥပဒေများအငြင်းပွားမှုအတွက်ငွေပမာဏ၏မသက်ဆိုင်ဘဲမူလလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ "
ICC ကအနုညာတစီရင် Clauses အခြားအကြံပြုချက်များ
အဆိုပါပါတီများပြည်မကြီးတရုတ်အတွက်ခုံသမာဓိ၏ထိုင်ခုံနဲ့ ICC ကအနုညာတစီရင်ရှိသည်ဖို့လိုပါလျှင်, အဆိုပါ ICC က အဆိုပါခုံသမာဓိအပိုဒ်အတွက်အနုညာတစီရင်၏ ICC ကနိုင်ငံတကာတရားရုံးတစ်ခုတွင်အကဲဆတ်သောရည်ညွှန်းအပါအဝင်အကြံပြု.
"၏ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရှိစာချုပ်နှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ထွက်လာသောအားလုံးအငြင်းပွားမှုများစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနိုင်ငံတကာကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးတင်သွင်းရမည်နှင့်နောက်ဆုံးတော့ခန့်အပ်တာဝန်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောခုံသမာဓိလူကြီးများကစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနိုင်ငံတကာကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင်၏စည်းကမ်းများအောက်တွင်အခြေချခံရကြလိမ့်မည် ဟုစည်းကမ်းများနှင့်အညီ။ "
ယင်းကိုအသုံးပြုနည်း option ICC က်ဖြန်ဖြေစည်းကမ်းများ
အငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်သည့်အခါတိုင်းဤ option ကိုနည်းပညာပိုင်းတည်ရှိနေစဉ်, အဆိုပါပါတီများအတိအလင်းအောက်ပါ option ကိုအပါအဝင်အားဖြင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေအားပေးလိုပေမည်.
"ဒီပါတီများသည့်အချိန်တွင်မဆို may, စိတ်စွန်းကွက်ခြင်းမရှိဘဲအခြားမည်သည့်တရားစွဲဆိုမှုမှ, ထဲကဒါမှမဟုတ် ICC က်ဖြန်ဖြေစည်းကမ်းများနှင့်အညီလက်ရှိစာချုပ်နှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ပေါက်မည်သည့်အငြင်းပွားမှုအခြေချရန်ရှာကြာလော့။ "
အဲဒီအစားဖျန်ဖြေ optional ကိုအောင်ထက်, အဆိုပါပါတီများမှာလည်းကြိုတင်ခုံသမာဓိကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်စေရန်ဖျန်ဖြေလိုအပ်နိုင်ပါသည်.
"၏ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရှိစာချုပ်နှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ပေါက်မည်သည့်အငြင်းပွားမှု၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့, အဆိုပါပါတီများဆွေးနွေးရန်နှင့် ICC က်ဖြန်ဖြေစည်းကမ်းများဖို့အငြင်းပွားမှုကိုရည်ညွှန်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပထမဦးဆုံးဥပမာပြောရရင်အတွက်သဘောတူသည်။ "
တောင်းဆိုနေတဲ့လျှင်စင်ပြိုင်အနုညာတစီရင်တရားစွဲဆိုထားခွင့်ပြုရေးနေစဉ် ICC က်ဖြန်ဖြေစည်းကမ်းများမှအငြင်းပွားမှုရည်ညွှန်းကိုးကားရန်တာဝန်
နောက်ထပ် option ကိုအပြိုင်အတွက် run ဖို့စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်းနှင့်ခုံသမာဓိခွင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်.
"၏ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရှိစာချုပ်နှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ပေါက်မည်သည့်အငြင်းပွားမှု၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့, အဆိုပါပါတီများကိုဦးစွာ ICC က်ဖြန်ဖြေစည်းကမ်းများအောက်တွင်တရားစွဲဆိုမှုဖို့အငြင်းပွားမှုကိုရည်ညွှန်းရကြလိမ့်မည်. ICC ကိုဖြန်ဖြေစည်းကမ်းများအောက်တွင်တရားစွဲဆိုမှုများ၏တင်သည့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Sub-အပိုဒ်က y နှင့်အညီခုံသမာဓိ့ထံမှမည်သည့်ပါတီမတားဆီးရကြလိမ့်မည်.
ထဲကဒါမှမဟုတ်လက်ရှိစာချုပ်နှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ထွက်လာသောအားလုံးအငြင်းပွားမှုများနောက်ဆုံးတွင်ဆိုပါတယ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီခန့်အပ်ထားသောတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောခုံသမာဓိလူကြီးများကစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနိုင်ငံတကာကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင်၏စည်းကမ်းများအောက်တွင်အခြေချတွင်စေရမည်။ "
ICC ကအာမခံအငြင်းပွားမှုရည်ညွှန်းကိုးကားရန်တာဝန်, တောင်းဆိုနေတဲ့လျှင် ICC ကအနုညာတစီရင်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်
"ထဲကဒါမှမဟုတ်လက်ရှိစာချုပ်နှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ပေါက်မည်သည့်အငြင်းပွားမှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, အဆိုပါပါတီများကိုဦးစွာ ICC က်ဖြန်ဖြေစည်းကမ်းများအောက်တွင်တရားစွဲဆိုမှုဖို့အငြင်းပွားမှုကိုရည်ညွှန်းရကြလိမ့်မည်. အငြင်းပွားမှုအတွင်းကဆိုပါတယ်စည်းကမ်းများအညီအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပြီးမမူလျှင်  အဆိုပါပါတီများအရေးအသားအတွက်သဘောတူပမေအဖြစ်ဖြန်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောသည်အခြားကာလအတွင်းတောင်းဆိုမှု၏ပုံစံတင်ပို့ရန်အောက်ပါရက်ပေါင်း, ထိုကဲ့သို့သောအငြင်းပွားမှုထို့နောက်နောက်ဆုံးတွင်အနုညာတစီရင်၏ဟုပြောသည်စည်းကမ်းများနှင့်အညီခန့်အပ်ထားသောတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောခုံသမာဓိလူကြီးများကစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနိုင်ငံတကာကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင်၏စည်းကမ်းများအောက်တွင်အခြေချခံရကြလိမ့်မည်."
အဆိုပါပါတီများ်ဖြန်ဖြေများအတွက်တောင်းဆိုခြင်း၏ပုံစံတင်ပို့ရန်အောက်ပါမတိုင်မီ 45 ရက်ကြာသို့မဟုတ်အခြားသဘောတူညီခဲ့ကာလသက်တမ်းကုန်ဆုံးရန်အရေးပေါ်ခုံသမာဓိပြဋ္ဌာန်းချက်မှပြန်လည်ကုရှိသည်ဖို့လိုပါလျှင်, အောက်ပါတိကျစွာအဆိုပါအပိုဒ်ထည့်သွင်းရပါမည်:
"စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ချက်  ရက်ပေါင်း, သို့မဟုတ်အခြားသဘောတူညီခဲ့ကာလ, ဖြန်ဖြေများအတွက်တောင်းဆိုခြင်း၏ပုံစံတင်ပို့ရန်အောက်ပါ, ခုံသမာဓိမှအငြင်းပွားမှုရည်ညွှန်းပြီးရှေ့မှာလျှောက်လွှာအောင်အနေဖြင့်ပါတီများတားဆီးရမည်မဟုတ်, သူတို့၏အမျိုးအသက်တမ်းကုန်ဆုံးရန်ကြိုတင်  ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်အခြားသဘောတူညီခဲ့ကာလ, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနိုင်ငံတကာကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင်၏စည်းကမ်းများအတွက်အရေးပေါ်ခုံသမာဓိပြဋ္ဌာန်းချက်အောက်မှာအရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ချက်များများအတွက်."
အဆိုပါပါတီများအရေးပေါ်ခုံသမာဓိပြဋ္ဌာန်းချက်မှပြန်လည်ကုရှိသည်ဖို့လိုပါလျှင်, ဒါပေမယ့်ကိုသာ 45 ရက်ကြာသို့မဟုတ်အခြားသဘောတူညီခဲ့ကာလသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်ဖြန်ဖြေများအတွက်တောင်းဆိုခြင်း၏ပုံစံတင်ပို့ရန်အောက်ပါ, အောက်ပါတိကျစွာအဆိုပါအပိုဒ်ထည့်သွင်းရပါမည်:
andrian Beregoi, Aceris ဥပဒေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေခိုင်မြဲသော